ရည်းစားတောင် မထားဖူးတဲ့ အပျိုလေးဆိုတော့ သိက္ခာကျ သွားတယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့ မမဆောင်း – Cele Oscar
ဇာတ်​ဝင်​​တေး​တွေ မှာသာမက ရုပ်​ရှင်​ကားကြီး​တွေပါ ရိုက်​ကူးခဲ့​ပေမယ့် အကယ်​ဒမီနဲ့ လွဲခဲ့သူမင်းသမီး ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်းကတော့ သူ့ရဲ့အင်​တာဗျူးတစ်​ခုမှာ ​ဖြေဆိုမှုရှုပ်​​ထွေးသွားရာက​နေ ပရိသတ်​​တွေကြား ​လူ​ပြောများ ခဲ့သူတစ်​ဦးပါသူမဟာ ​”​ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်း ရဲ့ချစ်သူဟာ ဆရာဝန်လား? စစ်ဗိုလ်လား? ဘောလုံးဥက္ကဌလား? “ဆိုပြီးတော့ ဝေဖန်မှု တွေက မြင့်တက်လာရာမှ ပရိသတိစိတ်​ဝင်​စားခံလာခြင်းဖြစ်​ပါတယ်​။သူ့ရဲ့အင်​တာဗျူး ​ဖြေဆိုပုံ​တွေ ပွင့်လင်းတဲ့​ပြောဟန်​​တွေ​ကြောင့် ပရိသတ်​​တွေကြား နားလည်​မှုလွဲစရာ​တွေ ဖြစ်​လာခဲ့ရပြီး အခုတစ်​ခါမှာလည်း စကားမှားခဲ့တာ​ကြောင့် မင်းသားရန်​​အောင်​ကို ​စော်​ကားသလိုဖြစ်​ခဲ့တာကို စိတ်​မ​ကောင်းဖြစ်​တာ​ကြောင့် ပြန်​လည်​​တောင်းပန်​ခဲ့ပါတယ်​။
“စကား​ပြောတာ ဘရိတ်​မရှိ​တော့ စည်းမရှိသ လိုဖြစ်​သွားတာ​ပေါ့​နော်​ တစ်​ချို့စာနယ်​ဇင်းဆရာ​တွေက နှိုက်​နှိုက်​ ချွတ်​ချွတ်​​မေးတဲ့အခါ ကိုယ်​​တွေကလည်း အတတ်​နိုင်​ဆုံး​ဖြေရာ​တာ​ပေါ့​နော်​ အဲ့အတွက်​အမှားရှိခဲ့ရင်​ မင်းသားကိုရန်​​အောင်​ရဲ့ပရိသတ်​​တွေကို မမ​ဆောင်း​တောင်းပန်​ပါတယ်​” လို့ သူမက ​ဖြေဆိုထားတာပါ။မီဒီယာတစ်​ခုက ​မေးမြန်းထားတဲ့ အွန်​လိုင်းမှာ မဖွယ်​မရာပုံ​တွေ ပို့တာနဲ့ပတ်​သတ်​တဲ့ ​မေးခွန်းကို မမ​ဆောင်း​ဖြေရာက​နေ မင်းသားရန်​​အောင်​ကို ထိခိုက်​သလိုဖြစ်​သွား​စေခဲ့တာပါ။ အဲဒီ့အတွက်​ သူမက“သူ့ပုံ​တွေထည့်ဆက်​ပြီးလုပ်​လိုက်​ကတည်းက ကိုယ်​သိလိုက်​တယ်​ သူစိတ်​ဆိုးမှာပဲ ပုံ​တေတက်​လာ​တော့ မီးမီး​ကြောက်​တယ်​ မီး​ကြောက်​တယ်​ဖြစ်​သွားတာ အဲ့တာနဲ့တင်​တဲ့မီဒီယာကို ဖျက်​ချ​ပေးဖို့​တောင်းပန်​ပြီးမှ အစ်​ကို့ကို​တောင်းပန်​ခဲ့ပါတယ်​” လို့ သူမ​တောင်းပန်​ရင်း​ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်​။
အစ်​ကို​တို့ကစိတ်​ထားပြည့်ဝသူ​တွေဆို​တော့ စိတ်​မဆိုး​တော့ ပါဘူးလို့ ​ပြောပြကာ ဒီအဖြစ်​အပျက်​မှာ ရန်​​အောင်​က​တော့ မမ​ဆောင်းကို အပျို​လေးဖြစ်​တဲ့အတွကစကား​ပြောတာမမှားဖို့ ဆုံးမခဲ့တယ်​လို့ဆိုပါတယ်​ဒီကိစ္စကို မမ​ဆောင်းက​တော
“မမဆောင်းက ရည်းစားတောင် မထားတဲ့ အပျိုလေးဆိုတော့ သိက္ခာကျသွားတယ် မမဆောင်း ဘဝမှာ စကားပဲမှားတာပါ ဘဝမှာ ကျန်တဲ့ အမှားမရှိခဲ့ဘူး စကားပြောတာ ဘရိတ်မရှိသလို ဖြစ်သွားတာပါ ” လို့ ​သူ့ရဲ့မှားယွင်းမှု အတွက်​ ကိုရန်​​အောင်​ပရိသတ်​နဲ့တကွ ပရိသတ်​ကြီးကို​တောင်းပန်​​ပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်​ပါတယ်။
ဇာတ်​ဝင်​​တေး​တြေ မွာသာမက ရုပ်​ရွင်​ကားကြီး​တြေပါ ရိုက်​ကူးခဲ့​ပေမယ့် အကယ်​ဒမီနဲ့ လြဲခဲ့သူမင်းသမီး ဆောင်းအျိေန္ဒထြန်းကေတာ့ သူ့ရဲ့အင်​တာဗ်ူးတစ်​ခုမွာျေဖဆိုမှုရှုပ်​​ထြေးသြားရာက​နေ ပရိသတ်​​တြေကြား ​လူျေပာမ်ား ခဲ့သူတစ်​ဦးပါသူမဟာ ​”​ဆောင်းအျိေန္ဒထြန်း ရဲ့ခ်စ်သူဟာ ဆရာဝန္လား? စစ္ဗိုလ္လား? ဘောလုံးဥက္ကဌလား? “ဆိုပြီးတော့ ဝေဖန္မှု တြေကျမင့်တက္လာရာမွ ပရိသတိစိတ်​ဝင်​စားခံလျာခင်ျးဖစ်​ပါတယ်​။သူ့ရဲ့အင်​တာဗ်ူးျေဖဆိုပုံ​တြေ ပြင့်လင်းတဲ့ျေပာဟန်​​တြေ​ကြောင့် ပရိသတ်​​တြေကြား နားလည်​မှုလြဲစရာ​တျြေဖစ်​လာခဲ့ရပြီး အခုတစ်​ခါမွာလည်း စကားမွားခဲ့တာ​ကြောင့် မင်းသားရန်​​အောင်​ကို ​စော်​ကားသလျိုဖစ်​ခဲ့တာကို စိတ်​မ​ကောင်ျးဖစ်​တာ​ကြောင့်ျပန်​လည်​​တောင်းပန်​ခဲ့ပါတယ်​။
“စကားျေပာတာ ဘရိတ်​မရွိ​တော့ စည်းမရွိသ လျိုဖစ်​သြားတာ​ပေါ့​နော်​ တစ်​ခ်ို့စာနယ်​ဇင်းဆရာ​တြေက နွိုက်​နွိုက်​ ချတြ်​ချတြ်​​မေးတဲ့အခါ ကိုယ်​​တြေကလည်း အတတ်​နိုင်​ဆုံးျေဖရာ​တာ​ပေါ့​နော်​ အဲ့အတြက်​အမွားရွိခဲ့ရင်​ မင်းသားကိုရန်​​အောင်​ရဲ့ပရိသတ်​​တြေကို မမ​ဆောင်း​တောင်းပန်​ပါတယ်​” လို့ သူမကျေဖဆိုထားတာပါ။မီဒီယာတစ်​ခုက ​မေျးမန်းထားတဲ့ အြန်​လိုင်းမွာ မဖြယ်​မရာပုံ​တြေ ပို့တာနဲ့ပတ်​သတ်​တဲ့ ​မေးခြန်းကို မမ​ဆောင်းျေဖရာက​နေ မင်းသားရန်​​အောင်​ကို ထိခိုက်​သလျိုဖစ်​သြား​စေခဲ့တာပါ။ အဲဒီ့အတြက်​ သူမက“သူ့ပုံ​တြေထည့်ဆက်​ပြီးလုပ်​လိုက်​ကတည်းက ကိုယ်​သိလိုက်​တယ်​ သူစိတ်​ဆိုးမွာပဲ ပုံ​တေတက်​လာ​တော့ မီးမီး​ကြောက်​တယ်​ မီး​ကြောက်​တယ်ျဖစ်​သြားတာ အဲ့တာနဲ့တင်​တဲ့မီဒီယာကို ဖ်က်​ခ်​ပေးဖို့​တောင်းပန်​ပြီးမွ အစ်​ကို့ကို​တောင်းပန်​ခဲ့ပါတယ်​” လို့ သူမ​တောင်းပန်​ရင်းျေဖကြားခဲ့ပါတယ်​။
အစ်​ကို​တို့ကစိတ်​ထာျးပည့်ဝသူ​တြေဆို​တော့ စိတ်​မဆိုး​တော့ ပါဘူးလို့ျေပျာပကာ ဒီအျဖစ်​အပ်က်​မွာ ရန်​​အောင်​က​တော့ မမ​ဆောင်းကို အပ်ို​လေျးဖစ်​တဲ့အတြကစကားျေပာတာမမွားဖို့ ဆုံးမခဲ့တယ်​လို့ဆိုပါတယ်​ဒီကိစ္စကို မမ​ဆောင်းက​တော
“မမေဆာင်းက ရည်းစားတောင် မထားတဲ့ အပ်ိုလေးဆိုတော့ သိက္ခာက်သြားတယ် မမေဆာင်း ဘဝမွာ စကားပဲမွားတာပါ ဘဝမွာ က်န္တဲ့ အမွားမရွိခဲ့ဘူး စကာျးေပာတာ ဘရိတ္မရွိသလျိုဖစ်ြသားတာပါ ” လို့ ​သူ့ရဲ့မွားယြင်းမှု အတြက်​ ကိုရန်​​အောင်​ပရိသတ်​နဲ့တကြ ပရိသတ်​ကြီးကို​တောင်းပန်ျေပာကြားခဲ့တာပျဲဖစ်​ပါတယ်။